Malunga Nathi - Anke Ukupakisha Company Limited
Ingqayi ye-Balm ye-CBD
Iibhotile ze-Unicorn Eliquid
Ezinye iibhotile Inyathi Type
Gcwalisa (DIY) Ibhotile yeEliquid
Iingcebiso ze-V1 Screw
Iingcebiso ze-V3 Screw
Ukucaca obakhe Printing
Cadillacs Cap iibhotile
Ibhotile yokuQhawula iBhola
Ibhokisi kunye nephepha ityhubhu
Iibhotile SIZE BIG
500ml neebhotile 1l
Beri Cap iibhotile
Iibhotile Cap Flat
Ezinye iibhotile Popular PE
Ezinye iibhotile Popular PET
Okunye Size Bottle Plastic
Yasekwa ngo-2009, ANKE Ukupakisha Co; Ltd lishishini eliphambili kwishishini lokupakisha le-Eliquid & CBD. Igxininisa indawo ka-22,000 square metres, kunye workshop kwimveliso mihla, workshop yokugcina ekrelekrele,
Amaziko eR & D, amaziko okusebenza, kunye nezinye izibonelelo. Ngoku sinemigca eli-15 yemveliso yebhotile yeplastiki, imigca emi-6 yebhotile yeglasi kunye nebhokisi yokushicilela iphepha. Isikali semveliso yonyaka singaphezulu kwe-230 mln iiPC ezibandakanya
plastic yokuwisa, iibhotile eziphezulu zebhotile, iingqayi ze-CBD, iibhotile zeglasi, izikhongozeli zeglasi njalo njalo.
Ngayo yonke imigudu yeqela lethu, iofisi ye-ANKE France isekwe eLille. Kungcono ngoku ukubonelela ngendawo yokugcina kunye nokuhambisa iinkonzo kubathengi baseYurophu!
ANKE wamkele unxibelelwano lwakho!
Ulwazi kunye neemfuno sifumana evela abathengi, iSebe wethu ngeles, iSebe loPhando, iSebe Production, Umgangatho iSebe Control, Ukupakisha & iSebe Ukuthumela Emva umsebenzi weSebe iintengiso kunye ukunika iibhotile egqibeleleyo.
Sales iSebe-Qinisekisa iimveliso ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Iqela lethu yokuthengisa professional kwiimveliso nonxibelelwano. Siza kuba unxibelelwano kakhulu ubumnandi kwaye uqinisekise iinkcukacha lula.
ISebe Production --- Product iimveliso ngqo ufuna. Bonke abasebenzi bethu abanamava kwaye noqeqesho nyanga zonke. Oomatshini ziya kutshekishwa kunye nokulondolozwa rhoqo. Ngale ndlela, iibhotile kwizinga eliphezulu ingaveliselwa.
Quality ISebe Control --- Qinisekisa imveliso yakho nganye efezekile. uhlobo nganye ibhotile inkqubo ekhethekileyo yolawulo lomgangatho. imveliso ngasinye avavanywe izihlandlo ezi-3 phambi kokuba ekuthuthweni. Ngoko ke Ibhotile ngalinye liya kuba echanekileyo igqibeleleyo.
Ukupakisha & ISebe Shipping --- sokuBuyelwa uza kufumana iibhotile okulungileyo kwexesha. Products ziya zipakishwe kwiibhokisana zamafu ukukhusela. Kwakhona siza amalungiselelo nokuhambisa kwangaphambili ukuqinisekisa, iimveliso once ningekalungi, sidaniswe thina singakwazi ukuthumela ngaphandle.
Ukusebenza kunye ANKE Ukupakisha, uza kufumana iimveliso abafezekileyo kwakunye kwinkonzo yobungcali. Nika sobabini ithuba, uza kufumana iqabane ethembekileyo.
Umnxeba: +86 185 3314 1341
Idilesi: Igumbi No.2, Xiaogang mingzhu Beiheng Road, District Baiyun, Guangzhou City, China.